Gbanwe ire ahịa gị site na ụzọ ọtụtụ ụzọ | Martech Zone
Akpọrọ m ka m sonye na mkparịta ụka mkparịta ụka na nso nso a na Ahịa ahịa Ahịa Ahịa nke Ahịa na Atlanta. Oge a lekwasịrị anya na Mgbanwe Ahịa, ya na ndị otu ahụ na-enye echiche na nghọta ha banyere omume kacha mma na ihe ịga nke ọma dị egwu.
Otu n'ime ihe mkparịta ụka mbụ gbara mbọ ịkọwa okwu ahụ n'onwe ya. Gịnị bụ ahịa mgbanwe? A na-ausedụbiga ya oke na ikekwe hyped? Nkwenye zuru oke bụ na, n'adịghị ka ire ahịa ma ọ bụ nkwado, nke nwere nkọwa nkọwa na nkọwa zuru oke, mgbanwe ahịa na-agbanwe mmezi ihe nke nzukọ ahịa na obere mgbanwe iji meziwanye arụmọrụ.
ihe onwunwe na nke a, ọ ga-emetụta ọtụtụ akụkụ nke nzukọ ahụ, gụnyere:
Usoro ịga ahịa (ọwa, ahịa, ngwaahịa, ịnye ọnụahịa, ndị na-ege ntị)
Akụrụngwa na-akwado (ahịa ahịa, usoro, teknụzụ)
Ihe ndị metụtara mmadụ dịka ire ahịa na atụmatụ atụmatụ
N'ọtụtụ ọnọdụ, ọrụ mgbanwe gbatịrị mgbalị 1-2 afọ ma nwee ike ikpughe nzukọ otu oke ihe egwu dị na usoro ahụ. Iji maa atụ, ka nzukọ gbanwere, ha ka na-emezu ebumnobi atọ ọ bụla. Were ya dị ka ịnwa ịgbanwe taya n’elu ụgbọ ala gị ka ị na-anya ụgbọala. Okwu ọzọ nke ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ezute na ọtụtụ afọ ọrụ bụ ohere maka ndị na-akpata azụmaahịa azụmaahịa na-akpata mgbanwe ịgbanwe, nwere ike ime ka nsonaazụ ahụ ghara ịdị mkpa!
Kedu ihe na-eme mgbanwe n'ime nzukọ ahịa?
Panellọ ọrụ ahụ gosipụtara isi ihe abụọ kpatara mgbanwe: mpụga na nke ime. Ihe ndị dị na mpụga gụnyere ihe dịka mgbanwe n'ịzụ ahịa, mgbanwe teknụzụ na ndị na-abanye asọmpi ọhụrụ. Ngwaahịa ọhụrụ, njikọta na nnweta na ngbanwe nke njikwa na-anọchite anya ihe dị n'ime. Panellọ ọrụ ahụ kwenyere na mgbanwe na omume ndị na-azụ ahịa bụ otu n'ime ihe na-akpatakarị mgbanwe.
Mgbanwe n’izu ịzụ ihe bụ akara nke:
Ndị ahịa 'nwetawanye ozi
Nnukwu itinye aka nke ndị nwere oke na mkpebi azụmaahịa (nke a na-ahụkarị)
Otu ndị na-azụ ahịa na-arụ ọrụ karịa
Ndị na-azụ ahịa na-abawanye atụmanya nke ndị na-ere ahịa n'ihe gbasara itinye ahụmịhe ha na ahụmịhe ha iji meziwanye nsonaazụ azụmaahịa
Maka otutu ndi otu ahia, igbanwe mgbanwe ahia bu nnukwu ajuju. A sị ka e kwuwe, anyị na-ekwu maka ịgbanwe ụzọ ahịa ndị na-ere ahịa na-esi ere, nke pụtara ịgbanwe agwa gbanyere mkpọrọgwụ. Nke a nwere ike isi ike ibute na ọbụnadị ike ịkwagide. Ọ bụrụ n’ịtụle mbọ gara aga iji gbanye mgbanwe n’ime nzukọ ahịa (ikekwe site na mmemme ọzụzụ ma ọ bụ site na iwebata teknụzụ ọhụụ, otu n’ime ihe ndị kachasị eme ka ha daa bụ n’ihi na ndị ahịa anabataghị ahịa dị mma.
Kedu ihe kpatara na ahịa anaghị ewere teknụzụ?
Maka ndị isi ahịa ole na ole na-etinye onwe ha n'ahịa akpụkpọ ụkwụ ndị ahịa wee zaa ajụjụ a Kedu ihe dị na ya maka m? Ọ bụrụ na ndị na-ere ahịa ahụghị uru ọ bara n'ịgbanwe ụzọ ha si azụ ahịa, ọ bụ naanị oge tupu ha alaghachi n'omume ochie.
Nke a na-aga aka na nkwenye siri ike ọzọ a na-elegharakarị anya: onye njikwa ahịa bụ akụkụ dị oke mkpa nke ihe ngwọta. Onye njikwa ahia ga-enwerịrị ike ma kwadebere iji kwurịta okwu ma mee ka mgbanwe ndị a na-etinye n'ọrụ sikwuo ike. Na ya mere ntụgharị ebumnuche azụmaahịa n'azụ mgbanwe bụ isi ihe.
Ma, lee ihe ite. Ọbụna ma ọ bụrụ na onye nnọchiteanya ahụ na-aghọta mkpali ahụ, ọ bụrụ na ngbanwe omume na-esiri ike ịnabata ma rie - ọ bụ maka dejupụta atụmatụ akaụntụ, imelite usoro CRM ma ọ bụ ịgbaso usoro dị iche - ọ nwere ike bụrụ amụma na-emezu onwe gị na gị laghachi na square otu tupu ị mara ya. Nke a bụ otu n'ime ihe kpatara eji akọ na 87% nke ihe ọmụma niile enyere na mmemme ọzụzụ echefuru ma ọ bụ eleghara ya anya mgbe ụbọchị 30 gachara.
Iji mee ka nke a ka njọ, ọ bụghị otu nha ka ọ ga-eme. Iji usoro ọ bụla, mmụta, ma ọ bụ teknụzụ eme ihe niile. Ọ dị mgbagwoju anya. Kedụ ka ị ga - esi tinye onye ọ bụla metụtara ọrụ n’ụzọ bara uru? Mkparịta ụka a na-emetụta:
Ihe ị na-ere
Onye i na erere
Na mpaghara ụlọ ọrụ
Iji lebara ụdị azụmahịa ịchọrọ anya
Megide ihe onye osompi (s)
Gịnị bụ a ahịa onye ndú ime?
Enweghị ọla-ọcha. A multi-threaded obibia bụ gị mma nzọ. Ikwesịrị ịkụziri, HAVE nwere onye nchịkwa, IJI mejuputa usoro ọhụrụ ma nyefee ọdịnaya ọhụrụ, I kwesiri inye ngwaọrụ ọhụrụ, dozie ókèala na atụmatụ atụmatụ, wdg. . A ga-eduzi ha na egwu egwu. Ọzụzụ siri ike site na nkuzi dị irè. Usoro nke ọdịnaya na ngwaọrụ dị irè na-akwado. Onye ọ bụla nwere ike imeghari iji hụ na ndị na-emegharị ihe na-agbanwe usoro ha maka ọnọdụ ọrịre ọ bụla.
Tags: ịzụ omumemgbanwe mgbanweNkwado ire ahịaarụmọrụ ahịareignment ahịaatụmatụ ire eremgbanwe ahịa
Ọrụ Ntugharị na Ntugharị AllGraduates
Ọkt 12, 2014 na 2:11 AM
Na ahịa, ọ dị ezigbo mkpa iji jikọọ na ahịa ịchọrọ ma mee ka ozi dị mkpa maka ha ọbụlagodi mgbe enweghị oke na nkwukọrịta. Na izipu ozi gị na ndị na - ege gị ntị, ị ga - enweta ohere ka mma maka ROI.